"Muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya oo sii xoogeysan kara" - BBC News Somali
Image caption Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Kenyatta
Xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay sii xoogeysato, xilli hadda uu soo dhawaaday waqtigii ay maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda go'aan kasoo saari lahayd muranka xadka badda ee u dhaxeeya labada dal, Sida lagu xusay Qormo lagu daabacay wargeyska The Standard ee kasoo baxa dalka Kenya.
"Sii wadista tallaabo kasta oo looga hor imaado ama wax loogu dhimo darbiga xadka waxaa looga jawaabi doonaa si ay awood ku dheehantahay," ayaa lagu yidhi qormada warqadda oo ay saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, lana sii marsiiyay howlgalka Kenya ee Soomaaliya, ka dibna lasii gaarsiiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 25-kii isla bishii May.
'Dhibka lagu hayo kooxda dhismaha wadda'
Image caption Kenya ayaa darbi dheer ka dhiseysa xadka ay la wadaagto Soomaaliya
Warqaddaas ayey Kenya ku xustay eedeyn ay Soomaaliya ugu jeedisay in "si aan kala joogsi lahayn" loo carqaladeeyo howsha dhismaha darbiga, loona adeegsado haween iyo carruur waxyeello u geysta ciidanka ammaanka iyo kooxda dhismaha ku howlan.
"Kenya waxay qiyaaseysaa qiimaha ku kacaya waxyeellada ay geysteen muwaadiniinta Soomaalida ah iyadoo qorsheyneysa inay dalbato magdhow," ayaa lagu yidhi warqaddaas oo ka koobneyd labo bog, uuna arkay wargeyska The Standard.
Sidoo kale warqadda gudaheeda, Kenya waxay Soomaaliya ku eedeysay inaysan dhakeeda ka xoojinin wanaagga ay Kenya sameyneyso.
'Cadaadis dheeraad ah oo lagu hayo Soomaaliya'
Wargeyska The Standard ayaa sheegay in ilo wareedyo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya, oo ka gaabsado in la xuso, ay u sheegeen in xukuumadda Muqdisho ay dulqaad ka muujineyso cadaadisyo dheeraad ah oo ay dowladda Kenya sameyneyso, kuwaasoo ka dhan ah saraakiisheeda iyo dadkeeda ganacsatada ah, xilli laga war sugayo go'aanka maxkamadda ICJ.
"Ma daneyneyno inay arrintu noqoto far-far-ku-fiiq. Waxaan daneyneynaa inaan Kenya la yeelanno xiriir wanaagsan," ayuu yidhi Cawad.
Maxay Soomaaliya ka tidhi xiriirka Kenya iyo Soomaaliland?
Wasiir Cawad ayaa ku qoslay su'aashii uu wargeyska weydiiyay ee ku saabsaneyd wararka la isla dhex marayo ee la xiriira in Kenya ay xulafo la sameysaneyso maamullada Soomaaliya, gaar ahaan jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland.
"Waa dowladda Soomaaliya waxa Kenya u oggolaaday inay qunsuliyad ka sameysato Hatgeysa", ayuu yidhi, isagoo markaas ula jeeday in Hargeysa ay tahay magaalo ka tirsan Soomaaliya.
Go'aanka maxkamadda caddaaladda ee ICJ ay kasoo saareyso dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa la filayaa inuu soo baxo sannadka dambe.